Nanokatra Tranonkalam-baovao ho Fiarovana ny Fahalalahan-Gazety ny Mpanao Gazety Zokiolona ao Hong Kong · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Janoary 2017 6:07 GMT
Vakio amin'ny teny English, bahasa Indonesia, Español, English
Ny Kaoferansan-gazety Citizen News. Sary avy amin'ny Citizen News.
Nosoratan'i Macro Mak tao amin'ny inmediahk.net ny teny shinoa amin'ity lahatsoratra ity ary nivoaka tamin'ny 1 Janoary 2017. Navoaka manaraka eto ambany ny dikanteny Anglisy izay ao anatin'ny fiaraha-miasa famoahan-dahatsoratra indray.
Nanomboka tamin'ny 1 Janoary 2017 tao Hong Kong ny tranonkalam-baovao tsy mitady tombontsoa iray vaovao amin'ny teny Shinoa antsoina hoe Citizen News (Vaovaon'Olom-pirenena) .
Nanoritra ny iraka ataony tao anaty fanambarana ny tranonkala izay naorin'ny mpanao gazety zokiolona miisa 10 :
Ary hoy ny fanambarana tamin'ny fanombohan'ny tranonkala hoe:
Mitondra ny teny hoe “daholobe” (眾) ny anaran'ny Citizen News amin'ny teny Shinoa. Ny antony dia satria mino izahay fa ny vaovao dia tsy maintsy mikarakara sy manolotra tamberin'andraikitra amin'ny daholobe. Hampiroborobo ny fandraisana anjaran'ny daholobe amin'ny firesaham-baovao izahay, anisan'izany ny famokaram-baovao sy ny fanampiana ara-bola amin'ny fanaovana izany.
Daisy Li Yuet-wah no lehiben'ny toniandahatsoratry ny tranonkala, lehibe mpanatanteraky ny sampam-baovao an-tseraseran'ny Apple Daily News tao Taiwan teo aloha. Nandritra ny valan-dresaka fanombohan-draharaha no nilazan'i Li fa mikendry ny hanampy ny vahoaka hahatakatra ireo zava-misy ambadiky ny vaovao tapatapany sy ireo torohay mivezivezy an-tserasera ny tranonkala. Ankoatra ny tatitra fanadihadiana sy fampitam-baovao an-dahatahiry, dia hanangona ireo fomba fijery manerana ny tontolo politika isankarazany ary hanohana ara-bola ireo tati-baovaon'ny olom-pirenena ihany koa ny tranonkala.
Toniandahatsoratra raikitra miisa 10 no mamelona ny tranonkala, maro amin'izy ireo no niasa tamin'ny indostriam-baovao nandritra ny telopolo taona, toa an'i Daisy Li Yuet-wah manokana; Keung Kwok Yuen, lehibe mpanatanteraka toniandahatsoratra teo aloha tao amin'ny Mingpao Daily; ary i Chris Yeung, toniandahatsoratry ny vaovao politika teo aloha tao amin'ny South China Morning Post.
Nampitandrina tao amin'ny fanamarihany ihany koa i Mak Yin Ting, filohan'ny Fikambanan'ny Mpanao gazety teo aloha tao Hong Kong, tale tsy mpanatanteraky ny Citizen News fa mihalevona tsikelikely ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety ao Hong Kong ary tsy maintsy mijoro manoloana ny zava-tsarotra ireo mpanao gazety matihanina.
Laharana faha-69 amin'ny firenena 180 i Hong Kong ao amin'ny Tondro Fahalalahan'ny Asa Fanaovan-gazety 2016 navoakan'ny Reporters Sans Frontières, mitavozavoza aorian'ny Taiwan, izay eo amin'ny laharana faha 51. Laharana faha-18 ny tanàndehibe, izay fari-pitantanam-panjakana manokana manana fizakantena ambony miolotra amin'ny Tanibe ao Shina, tamin'ny taona 2002, raha nivoaka voalohany ny tondro, Vokatry ny fanivanan-tena ataon'ny sehatra fampitam-baovao mahazatra sy ny fitsabahana ara-politika avy any Beijing amin'ny alalan'ny fitantanan'ny efitrano famoaham-baovao no mahatonga ny fahasimban'ny tontolon'ny fampitam-baovao.
Nilaza i Mak Yin Ting fa ny hanampy ny asa fanaovan-gazety matihanina hiavo-tena hahatratra ny taranaka indray mihira manakara no nahatonga avy ao ambadika ny Citizen News:
Ny planina hanome famatsiam-bola ny tati-baovaon'olom-pirenena dia ny hahazoana ny fiarahamonina, hanova ny fahalalany sy ny fanahiany ho fitantaram-baovao. Amin'ny maha-mpikambana ao amin'ny fiarahamonina, vaovao sarobidy ny fanahian'olom-pirenena . […] hodinihin'ny komity akademika, ny mpanao gazety matihanina ary ny manam-pahaizana manokana ao amin'ny sehatra samihafa ny tolo-kevitra. Havoaka ao amin'ny tranonkala avy eo ny tatitra nahazo famatsiam-bola.
Kevin Lau, lehibe toniandahatsoratry ny Mingpao Daily teo aloha, izay tafavoaka velona tamin'ny fanafihana nataon'ny olona roa lahy nitondra antsibe tamin'ny taona 2014, dia tale tsy mpanatanteraky ny tranonkala Civic Journalists Limited, izay voasoratra anarana ho orinasa voafetran'ny antoka. Nanazava izy fa ny aingam-panahy nahatonga ny famoronana ny Citizen News dia avy amin'ny resaka nifanaovany tamin'ny namana raha mbola nitsabo tena avy tamin'ny fanafihana tao amin'ny hopitaly izy. Rehefa nivoaka avy ao izy dia nanatontosa fivoriana isam-bolana niaraka tamin'izy ireo hiomanana ho amin'ny ezaka vaovao.
Nilaza i Joseph Chan, mpampianatra asa fampitam-baovao sady iray amin'ireo mpanorina ny tranonkala nandritra ny valan-dresaka fa:
Tototry ny vaovao mitsipotipotika ny fiarahamonina. Ilaina ny manana sehatra manangona vaovao manan-danja avy amin'ny loharanom-baovao azo itokisana. […] Mankany amin'ny tombontsoan'ny orinasa lehibe ny ankamaroan'ny fampitam-baovao mahazatra , ary mendrika hanana tranonkala mpampita vaovao mahaleotena bebe kokoa i Hong Kong .
Hanomboka fanangonam-bola hamenoana ny vola lany amin'ny fanodinana azy ny tranonkala. 5 tapitrisa HK isan-taona , na eo ho eo amin'ny 129,000 dolara Amerikana eo, no kendrena izay tokony hahasahana ny rafitra famatsiam-bolan'ny vaovaon'olom-pirenena .